के प्रेस विज्ञप्ति अझै SEO को लागी राम्रो विचार हो? Semalt जवाफ दिन्छ
प्रेस विज्ञप्ति के हुन्
SEO को लागि आकर्षक प्रेस विज्ञप्ति कसरी सिर्जना गर्ने
किन SEO को लागी प्रेस विज्ञप्तिहरु (तिनीहरू अझै राम्रो विचार हो)?
वेबसाइट मालिकहरूको प्रमुख चिन्ता मध्ये एक उनीहरूको वेबसाइटमा ट्राफिक कसरी ड्राइभ गर्ने भन्ने हो। एक वेबसाइट केवल वेब साइट भ्रमण गर्ने व्यक्तिको संख्या जत्तिकै प्रभावकारी छ। ट्राफिकको लागि यो खोजीले वेबसाइट मालिकहरूलाई धेरै अनुत्पादक कार्यहरू गर्न मद्दत गरेको छ जुन उनीहरूलाई कुनै पनी सम्बन्धित परिणामहरू बिना पैसा खर्च गरेको छ।
केहि मानिसहरु के सोच्छन को विपरित, धीमा यातायात को एक सरल समाधान खोज ईन्जिन अप्टिमाइजेसन (SEO) मा ध्यान केन्द्रित गर्नु हो। SEO ले तपाईंलाई दृश्यता सुधार गर्न र तपाईंको खोजी प्यारामिटरहरूको गुणवत्ता बढाउन मद्दत गर्दछ कि तपाईंको वेबसाइट खोज ईन्जिनमा सजिलैसँग पत्ता लगाउन सकिन्छ जब सम्भावित आगन्तुकहरू खोज कुञ्जीहरूको लागि खोजी गर्न ईन्जिनहरूमा जान्छन्।
हालसालै, वेबसाइट मालिकहरूले उनीहरूको एसईओ बढाउन र उनीहरूको वेबसाइटमा ट्राफिक सामान्यतया बढाउन प्रेस विज्ञप्तिहरूको प्रयोगको उपयोग गरेका छन्। जबकि कोहीले प्रेस विज्ञप्तिलाई विगतको चीजको रूपमा हेरेका छन्, अरूले विश्वास गर्छन् कि तिनीहरू अझै SEO लाई प्रासंगिक छन्। त्यसोभए, के तपाइँ तपाइँको एसईओ को लागी प्रेस विज्ञप्तिहरु को उपयोग गर्नु पर्छ? प्रेस रिलिज र एसईओ को बारे मा जान्नु आवश्यक सबै को लागी तल पढ्नुहोस्, र यदि तपाइँको एसईओ को लागी प्रेस विज्ञप्ति को उपयोग गर्नु चतुर छनोट हो।
२. प्रेस विज्ञप्ति के हुन्?
प्रेस विज्ञप्ति दिने विचार पुरानो हो। यो मानिसका जिज्ञासु प्रकृतिलाई फाइदाको बिन्दुमा प्रसारण गर्न यसैले लाभ उठाउँदछ कि तपाईं तिनीहरूलाई त्यस लेखमा मात्र हेर्न चाहानुहुन्छ भन्ने कुरामा मात्र चिप्लिन्छ।
एक प्रेस विज्ञप्तिले छोटो, संक्षिप्त, र आकर्षक शब्द वाक्यांश वा वाक्यहरू प्रयोग गर्दछ पाठकहरूको ध्यान खिच्नको लागि तपाईंले चाहेको बुँदामा ध्यान दिन। एक प्रेस विज्ञप्तिको साथ, व्यवसाय मालिकहरू, पत्रकारहरू, र अधिक हालसालै, वेबसाइट मालिकहरूले उनीहरूलाई अधिक दृश्यात्मक बनाएका छन र उनीहरूको लक्षित श्रोताको ध्यान खिच्दछन्।
प्रेस विज्ञप्ति प्रायः छोटो, आकर्षक अभिव्यक्तिको प्रयोग गरेर रूचिको शीर्षकहरूमा विस्तृत तर संक्षिप्त जानकारी प्रयोग गरी गरिन्छ। तिनीहरूलाई विशेष रूपमा बाध्यकारीको रूपमा दर्साइएको छ ताकि कोहीले पनि तिनीहरूलाई ध्यान दिएर पूर्ण ध्यान दिएर प्रतिरोध गर्न सक्दैन। आजकल प्रेस विज्ञप्तिहरू लिखित ढाँचामा, छोटो, अडियो क्याप्शन वा भिडियोहरूमा पनि हुन सक्छ। जसको अन्तिम लक्ष्य सामान्यतया जसले हेरिरहेको छ उसको ध्यान कायम गर्नु हो।
SEO. एसईओ का लागि आकर्षक प्रेस विज्ञप्ति कसरी सिर्जना गर्ने?
अधिकांश वेबसाइट मालिकहरूले अझै बुझ्न सकेका छैनन् कि कसरी उनीहरूको वेबसाइटको लागि ट्राफिक सिर्जना गर्न प्रेस विज्ञप्तिहरूको लाभ उठाउन। एसईओ को लागी एक प्रेस विज्ञप्ति को उपयोग पछाडिको विचार भनेको तपाईको वेबसाइटमा लिंकहरू संलग्न गर्नु र सामग्रीहरू सिर्जना गर्नु हो जसले पाठक वा दृश्यहरूलाई तपाईंको वेबसाइटमा अधिक विस्तृत विवरणहरूको लागि क्लिक गर्दछ।
यसको मतलव प्रेस विज्ञप्तिहरूमा उच्च-गुणवत्ता ब्याकलिl्क हुनुपर्दछ र रेफरलहरूबाट धेरै ट्राफिकहरू हुन् जुन च्यानलका प्रयोगकर्ताहरू हुन्। ब्याकलिks्कहरू तपाईंको वेबसाइटमा संलग्न लिंकमा आउने ट्राफिकमा धेरै भरपर्दो प्रभावको साथ नेटवर्कको रूपमा काम गर्दछ। जहाँसम्म, बढि वेबसाइट ट्राफिकमा ब्याकलिks्कको लहर प्रभावबाट फाइदा लिन तपाईंले जनताको ध्यान लामो समात्नुहुन्छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न प्रेस विज्ञप्ति बनाउने क्रममा सावधानी अपनाउनुपर्दछ।
यहाँ तपाइँको वेबसाइट को लागी एक सम्मोहक प्रेस विज्ञप्ति बनाउन को लागी केहि सुझावहरु छन्।
ब्याज कायम राख्न घोषणा गर्नुहोस्
यो प्रेस रिलिज सिर्जना गर्दा आवाश्यक रूपमा सबै भन्दा महत्वपूर्ण चरण हो। तपाइँको ध्यान र समय पहिलो एक प्रेस विज्ञप्ति मा तपाइँको लक्षित श्रोताको रुचि पकड र राख्नेछ कि तपाइँको घोषणा गर्न को लागी एक साधन खोज्नु पर्छ।
तपाईले भन्नु पर्ने कुरा कत्तिको महत्त्वपूर्ण छ, यदि तपाइँ तपाइँको लक्षित श्रोताको पूर्ण ध्यान प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न भने, तपाइँको प्रयासहरू प्रतिकूल हुन सक्छ। त्यसो भए तपाईले आफ्नो प्रेस विज्ञप्ति यस्तो तरीकाले डिजाइन गर्नु पर्छ कि यसले तपाइँको लक्षित श्रोतालाई मोहित गर्न सक्दछ। यो प्राप्त गर्न, तपाई कि त या त नवीन, जमीन तोड्ने, वा तपाइँको लक्षित दर्शकहरु लाई धेरै बहुमूल्य समाचार संग आउनु पर्छ।
तपाइँको हेडलाइन बाहिर हुनु पर्छ
बोरिंग हेडलाईनको साथ एक रमाईलो सामग्रीले तपाईंलाई ट्राफिक गुमाउनेछ। यो किनभने तपाईको हेडलाईन भनेको के हो बीचमा सम्पर्क को पहिलो बिन्दु हो र लक्षित दर्शकहरु जो तपाइँ के भन्न छ पहुँच गर्न को लागी। त्यसोभए, तपाईंको सामग्री कत्ति चाखलाग्दो छ, यदि तपाईंको हेडलाईन समाचार योग्य छैन भने, तपाईं लामो अवधिको धेरै सम्भावित वेबसाइट आगन्तुकहरूमा हराउनुहुनेछ।
जहिले पनि प्रयास गर्नुहोस् र तपाईंको हेडलाइन आकर्षक, रमाईलो, र सकेसम्म संक्षिप्त बनाउनुहोस्।
यसलाई छोटो र संक्षिप्त हुन दिनुहोस्
पहिले नै औंल्याए अनुसार, धेरै लामो र शब्दपूर्ण प्रेस विज्ञप्तिले तपाईंलाई केही पनि राम्रो गर्दैन। यो किनभने मानिसहरूसँग सामान्य रूपमा छोटो ध्यान अवधि हुन्छ र तपाईंको लक्षित दर्शकहरू फरक हुँदैनन्। यो किन तपाईं आफ्नो प्रेस विज्ञप्ति छोटो छोटो बनाउन सिक्नु पर्छ।
यद्यपि, सावधान हुनुपर्दछ र यो निश्चित गर्नुपर्दछ कि तपाइँ तपाइँको प्रेस विज्ञप्तिमा महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनुहुन्न; यसले तपाईंको एसईओ लाई पनि हानि पुर्‍याउँछ। तपाइँको ब्याकलि press्कहरू बढाउन र तपाइँको वेबसाइटमा ट्राफिक बढाउन एक छोटो तर विस्तृत प्रेस एउटा राम्रो तरिका हो।
तपाईंको लक्ष्य दर्शक स्प्याम गर्नबाट जोगिनुहोस्
तपाइँको प्रेस विज्ञप्ति वितरण भन्दा बढीको प्रलोभनको प्रतिरोध गर्नुहोस्। तपाइँले के गर्नु पर्छ एक पटक तपाइँले बाध्यकारी प्रेस विज्ञप्ति सिर्जना गरेपछि एक वा दुई प्रमुख प्लेटफर्महरू पत्ता लगाउनु हो जहाँ तपाइँका लक्षित दर्शकहरू छन् र त्यसपछि यसलाई साझा गर्नुहोस्।
जहाँसम्म, यदि तपाईं एउटै लक्ष्य दर्शकहरूलाई दोहोर्याएर प्लेटफर्ममा आफ्नो प्रेस विज्ञप्ति साझा गर्न थाल्नुभयो भने, तिनीहरू थाकेका वा बोर हुन सक्छन्। सबै ठाउँमा तपाइँको प्रेस विज्ञप्ति साझा तपाइँको लक्ष्यहरु को लागी हानिकारक हुन सक्छ; यो किनभने ओभरसेयरिंगले मान्छेले तपाइँको सन्देशलाई स्पामको रूपमा हेर्न सुरू गर्न सक्छ र वास्तविक सम्झौता होईन। तपाईलाई गर्नु पर्ने भनेको सही स्रोत पत्ता लगाउनु र यो कुरा निश्चित गर्नु हो कि तपाईको प्रेस विज्ञप्ति स्प्याम मेलको रूपमा पठाइएको छैन, ताकि व्यक्तिले सोच्दैन कि यो जंक जानकारी हो।
SEO. के एसईओका लागि प्रेस विज्ञप्तिहरू छन् (के तिनीहरू अझै पनि राम्रो विचार हो)?
यसको सीधा उत्तर हो हो। यो किनभने एसईओ को मुख्य ध्यान तपाईंको वेबसाइट पहुँच गर्ने आगन्तुकहरूको संख्या वृद्धि गर्नु हो। सही तरिकाले गरेको प्रेस विज्ञप्तिले कुनै पनि समस्या बिना यो सजीलै हासिल गर्नेछ।
प्रायः एसईओ रणनीतिहरू तपाईंको वेबसाइटमा ट्राफिकको मात्रा र गुणवत्ता बढाउनमा केन्द्रित हुन्छन् जुन ध्यान नदिईएको ट्राफिकको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यस भुक्तानी नगरिएको ट्राफिक केहि खोजशब्दहरूको अनुकूलित प्रयोगबाट आएको हो जुन तपाईंको लक्षित दर्शकहरूले प्राय: खोज इञ्जिनहरूमा खोजी गर्दछन्।
यो किन एसईओ कम्पनीहरूले मनपराउँदछन् Semalt खोजिएको वाक्यांशहरूको ढाँचा दिनको लागि कम्प्यूटराइज्ड एल्गोरिदमहरू प्रयोग गर्नुहोस् जुन तपाईंको लक्षित दर्शकहरूको सम्भावित वर्गले खोज्नेछ। तिनीहरू सहि खोज ईन्जिन पनि पत्ता लगाउँदछन् जसले तपाईंलाई अधिक प्रत्यक्ष यातायात दिन्छ र बिक्री बढावा दिन्छ। तपाईंको वेबसाइट र प्रेस विज्ञप्तिमा यी रणनीतिहरू प्रयोगको नतिजामा निम्न समावेश छन्:
तपाईंको वेबसाइट पहिले किन ढिलो ट्राफिक भएको कारण किनकी यो यस्तो देखिन्छ कि यो मान्छेको सही सेटमा हुनुपर्दछ। यी व्यक्तिहरू तपाईंको लक्षित दर्शकहरू हुनुपर्छ। के एक प्रेस विज्ञप्ति के गर्दछ कि यो तपाइँको लक्षित दर्शकहरूको ध्यान आकर्षित गर्दछ र तिनीहरूलाई निर्देशित गर्दछ तपाईंको वेबसाइट भ्रमण गर्न।
उनीहरूले तपाइँको प्रेस विज्ञप्तिमा जानकारी अनुसरण गर्दा, तपाइँले के कुरा गरिरहनु भएको छ भन्ने बारे अझ विस्तृत ज्ञान लिनको लागि तपाइँको वेबसाइटको लि link्कमा क्लिक गर्नुपर्नेछ र थप व्यक्तिलाई एउटा ब्याकलिंक भनिन्छ जसका बारे रेफर गर्नुहोस्। यि सन्दर्भित व्यक्तिहरूले बढि व्यक्तिलाई पनि सन्दर्भ गर्नेछ जब तिनीहरूले तपाईंको प्रेस विज्ञप्ति सामग्री देख्नेछन्, तपाईंको वेबसाइट ट्राफिकमा लहर प्रभावहरू सिर्जना गर्छन्।
२. ट्राफिकमा वृद्धि
जब तपाईं अधिक दृश्यता प्राप्त गर्नुहुन्छ, स्वचालित रूपमा तपाईंको ट्राफिक बढ्नेछ साथै तपाईंको ब्याकलिंक, जसले तपाईंलाई खोजी इञ्जिन स्तर निर्धारणमा पनि मद्दत गर्दछ। तपाईंले यो थाँहा पाउनु अघि, तपाईंले धेरै ट्राफिक प्राप्त गर्नुहुनेछ जुन तपाईंको वेबसाइटले पहिले देखेको साक्षीलाई उछिन्थ्यो।
तपाईंको वेबसाईटमा ट्राफिकमा भएको यो वृद्धि एसईओमा परिचालित अधिकांश प्रेस विज्ञप्ति अभियानहरूको अन्तिम लक्ष्य हो। यो प्रयोग गर्नका लागि सही चरणहरूको अनुसरण गर्न असम्भव छ SEO उपकरणहरू र प्रेस विज्ञप्ति र यातायात मा वृद्धि देख्न छैन! यसमा कुनै छक्कलाग्दो कुरा छैन जुन मानिसहरू यो जान्दछन् उनीहरूले आफ्नो वेबसाइटमा उनीहरूको एसईओको लागि प्रेस विज्ञप्तिहरूको प्रयोगको फाइदा लिन जारी राखेका छन्।
ब्रान्ड अवेयरनेस बढाउनुहोस्
यो पोइन्ट एसईओ को लागी प्रेस विज्ञप्तिहरु को उपयोग को एक सूक्ष्म लाभ हो। प्रेस विज्ञप्तिको प्रयोगमा अक्सर ब्राण्ड वाक्यांशहरू निकाल्ने समावेश हुन्छ जसले ब्रान्ड छविहरू प्रतिनिधित्व गर्दछ ताकि छोटो, आकर्षक, तर प्रेस विज्ञप्तिमा संक्षिप्त सन्देशहरू हुनेछन्। यसले के गर्छ यसले तपाईंको लक्षित दर्शकहरूलाई तपाईंको ब्रान्डको बारेमा सचेत हुन अनुमति दिन्छ।
यसले एसईओ को लागी प्रेस विज्ञप्ति को उपयोग लाई ब्राण्ड छवि को प्रमोट गर्न को लागी एक सूक्ष्म तरीका लाई बनाउँछ जो तपाइँको वेबसाइट वा ब्रान्ड को प्रतिनिधित्व गर्दै छ। ज्यादै व्यावासायिक मालिकहरू जो इन्टरनेट जानकार छन् उनीहरूले आफैंको लागि छवि बनाउने बित्तिकै लामो समय सम्म यस लाभ उठाए कि रहन आएका छन्।
Fin. अन्तिम विचारहरु
माथिकोबाट, यो स्पष्ट छ कि प्रेस विज्ञप्ति एसईओ अनुकूलनको लागि महत्त्वपूर्ण उपकरण रहन्छ। मुख्य कुरा के हो भने तपाइँ कसरी आफ्नो फाइदाको लागि एसईओ को लागी प्रेस विज्ञप्ति प्रयोग गर्नुहुन्छ। यस पोष्टमा जानकारी प्रयोग गर्दै, र एक एसईओ वेबसाईट प्रमोशन एजेन्सीको सहयोगको साथ Semalt, तपाईं एक बाध्यकारी प्रेस विज्ञप्ति सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईंको श्रोतालाई एक तरीकाले संलग्न गर्नुहोस् जुन ट्राफिक बढ्छ, दृश्यता सुधार गर्दछ र अन्तत: बिक्री बढाउँदछ। आजै सुरू गर्नुहोस् र तपाईंको वेबसाइटमा ट्राफिक ज्यामितीय रूपमा बढ्नुहोस्।